ဆံပင်ပါးတဲ့ယောင်းတွေအတွက် Hair styling လုပ်နည်း (၅) နည်း - For her Myanmar
ဆံပင်ပါးတဲ့ယောင်းတွေအတွက် Hair styling လုပ်နည်း (၅) နည်း
ဆံပင်ပါးလို့ စိတ်ညစ်နေသလား ?
ယောင်းတို့ရေ … ဆံပင်ပါးတာကလည်း တစ်ခါတလေကျ စိတ်ညစ်စရာ ကောင်းလွန်းပါတယ်… အမြဲလိုလိုပြားကပ်ကပ်နဲ့ ရေများစိုလိုက်ရင် ကြွက်စုတ်လုံးလုံးဖြစ်ရော … သူများတွေလို အုံထူထူလေးနဲ့ ဖလန်းချင်ပေမဲ့ မိန်းမတို့အလို ဆံပင်မလိုက်နိုင်ဆိုသလို ဆံပင်အလိပ်လှလှလေးတွေဟာ Stella လို ဆံပင်ပါးတဲ့သူအတွက်တော့ ဝေးပြီးရင်းဝေးပါပဲ။ ဒီတော့ ဆံပင်အုံမထူတဲ့သူတွေအတွက် ဆံသားထူသယောင်ဖြစ်စေမယ့် Styling tips လေးတွေ ဝေမျှပေးသွားမယ်နော်…
Blow-dry လို့ခေါ်တဲ့ အခြောက်မှုတ်တာက ယောင်းဆံကေသာကို ပွယောင်းယောင်းဖြစ်စေတာမို့ အုံထူသယောင်နဲ့ ပုံကျစေပါတယ်။ ဆိုင်မှာသေချာလေးလုပ်ရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့နော်။
ဆံပင်ဖြီးတဲ့အခါ အောက်ကနေအပေါ်ကို လှန်ဖြီးတာက ယောင်းရဲ့ဆံပင်ကို ထူသယောင်ဖြစ်စေပါတယ်။ ဆံပင်ချထားမယ်ဆိုရင်တော့ ဆံပင်ကို အပိုင်းလေးတွေခွဲပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းပြန်ဖြီးတာက စူပါမော်ဒယ်တွေလို အုံထူတဲ့ဆံပင်ဖြစ်စေမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီနည်းက ဆံသားနှစ်ခွဖြစ်ပြီး ဆံပင်ကိုပျက်စီးစေတာကြောင့် Stella ကတော့ အားမပေးပါဘူး။
Related article >>> ငွေကုန်ကြေးကျသက်သာစွာနဲ့ အိမ်မှာအလွယ်တကူလုပ်နိုင်မယ့် Face Mask (၃) ခု
(၃) Hair Spray
စပရေးဖြန်းထားတဲ့အခါ ဆံပင်က တောင့်ပြီး ပုံသွင်းထားတဲ့အတိုင်း တစ်နေကုန်ခံတာမို့ ပွဲတက်စရာရှိတဲ့အခါတွေပါ အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်တစ်နေ့မှာ ဂျပ်ခဲကြီးဖြစ်နေတာမို့ ခေါင်းထပ်လျှော်ရတဲ့ အချက်ကတော့ သတိထားစရာပါပဲ..
(၄) Dry Shampoo
ဒါကတော့ Stella အကြိုက်ဆုံးနည်းလမ်းပါ။ ခေါင်းမလျှော်ရသေးတဲ့အချိန် အဆီထွက်ပြီး ဆံပင်ပြားကပ်ကပ်ဖြစ်နေပြီဆို Dry Shampoo ကောက်သုံးလိုက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီလိုနွေရာသီမှာ မရှိမဖြစ်ပါ။ အချိန်သိပ်ပေးစရာမလိုဘဲ ဆံပင်ပုံကျသွားတာမို့ အိတ်ထဲမှာ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ အရာတစ်ခုပါပဲ ယောင်းတို့ရေ…
ဆံပင်ပါးတဲ့ကောင်မလေးအများစုရဲ့ အိပ်မက်က ထူထူအိအိဆံပင်အခွေအလိပ်တွေပါ။ ရုပ်ရှင်တွေ မဂ္ဂဇင်းတွေထဲမှာ ဆံပင်အခွေအလိပ်လေးတွေနဲ့ မင်းသမီးတွေ မော်ဒယ်တွေကိုတွေ့ရင် သိပ်အားကျရတာပေါ့။ အဲ့လိုအခွေအလိပ်လေးတွေကို ဆံပင်အုံမထူလည်း ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီ။ အရင်ဆုံး ဆိုင်မှာ အထပ်ထပ်ဆံပင်စတိုင်လ်လေးညှပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ အိမ်မှာ အပူချောင်းနဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်အလိပ်ကြီးကြီးလိပ်ပြီး စပရေးဖြန်းလိုက်ပါ။ ဒါဆိုယောင်းလည်း ဆံပင်အခွေလိပ်လိပ်လေးတွေ ရပြီးပေါ့။
ကဲ … ဒီလောက်ဆိုရင် ဆံပင်ပါးတဲ့ယောင်းတွေလည်း ဆံပင်ကို အုံထူသယောင်ဖြစ်အောင် ဘယ်လို styling လုပ်ရမလဲဆိုတာ သိကြလောက်ပြီပေါ့နော်။ ဒီထက်ပိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ လန်းနေနိုင်ပါစေ ယောင်းရေ …
ဆံပငျပါးလို့ စိတျညဈနသေလား ?
ယောငျးတို့ရေ … ဆံပငျပါးတာကလညျး တဈခါတလကြေ စိတျညဈစရာ ကောငျးလှနျးပါတယျ… အမွဲလိုလိုပွားကပျကပျနဲ့ ရမြေားစိုလိုကျရငျ ကွှကျစုတျလုံးလုံးဖွဈရော … သူမြားတှလေို အုံထူထူလေးနဲ့ ဖလနျးခငျြပမေဲ့ မိနျးမတို့အလို ဆံပငျမလိုကျနိုငျဆိုသလို ဆံပငျအလိပျလှလှလေးတှဟော Stella လို ဆံပငျပါးတဲ့သူအတှကျတော့ ဝေးပွီးရငျးဝေးပါပဲ။ ဒီတော့ ဆံပငျအုံမထူတဲ့သူတှအေတှကျ ဆံသားထူသယောငျဖွဈစမေယျ့ Styling tips လေးတှေ ဝမြှေပေးသှားမယျနျော…
Blow-dry လို့ချေါတဲ့ အခွောကျမှုတျတာက ယောငျးဆံကသောကို ပှယောငျးယောငျးဖွဈစတောမို့ အုံထူသယောငျနဲ့ ပုံကစြပေါတယျ။ ဆိုငျမှာသခြောလေးလုပျရငျတော့ ပိုကောငျးတာပေါ့နျော။
ဆံပငျဖွီးတဲ့အခါ အောကျကနအေပျေါကို လှနျဖွီးတာက ယောငျးရဲ့ဆံပငျကို ထူသယောငျဖွဈစပေါတယျ။ ဆံပငျခထြားမယျဆိုရငျတော့ ဆံပငျကို အပိုငျးလေးတှခှေဲပွီး ဖွညျးဖွညျးခငျြးပွောငျးပွနျဖွီးတာက စူပါမျောဒယျတှလေို အုံထူတဲ့ဆံပငျဖွဈစမှောပါ။ ဒါပမေဲ့ ဒီနညျးက ဆံသားနှဈခှဖွဈပွီး ဆံပငျကိုပကျြစီးစတောကွောငျ့ Stella ကတော့ အားမပေးပါဘူး။
Related article >>> ငှကေုနျကွေးကသြကျသာစှာနဲ့ အိမျမှာအလှယျတကူလုပျနိုငျမယျ့ Face Mask (၃) ခု
စပရေးဖွနျးထားတဲ့အခါ ဆံပငျက တောငျ့ပွီး ပုံသှငျးထားတဲ့အတိုငျး တဈနကေုနျခံတာမို့ ပှဲတကျစရာရှိတဲ့အခါတှပေါ အရမျးအသုံးဝငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ နောကျတဈနမှေ့ာ ဂပျြခဲကွီးဖွဈနတောမို့ ခေါငျးထပျလြှျောရတဲ့ အခကျြကတော့ သတိထားစရာပါပဲ..
ဒါကတော့ Stella အကွိုကျဆုံးနညျးလမျးပါ။ ခေါငျးမလြှျောရသေးတဲ့အခြိနျ အဆီထှကျပွီး ဆံပငျပွားကပျကပျဖွဈနပွေီဆို Dry Shampoo ကောကျသုံးလိုကျပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ဒီလိုနှရောသီမှာ မရှိမဖွဈပါ။ အခြိနျသိပျပေးစရာမလိုဘဲ ဆံပငျပုံကသြှားတာမို့ အိတျထဲမှာ ဆောငျထားသငျ့တဲ့ အရာတဈခုပါပဲ ယောငျးတို့ရေ…
ဆံပငျပါးတဲ့ကောငျမလေးအမြားစုရဲ့ အိပျမကျက ထူထူအိအိဆံပငျအခှအေလိပျတှပေါ။ ရုပျရှငျတှေ မဂ်ဂဇငျးတှထေဲမှာ ဆံပငျအခှအေလိပျလေးတှနေဲ့ မငျးသမီးတှေ မျောဒယျတှကေိုတှရေ့ငျ သိပျအားကရြတာပေါ့။ အဲ့လိုအခှအေလိပျလေးတှကေို ဆံပငျအုံမထူလညျး ပိုငျဆိုငျနိုငျပါပွီ။ အရငျဆုံး ဆိုငျမှာ အထပျထပျဆံပငျစတိုငျလျလေးညှပျလိုကျပါ။ ပွီးရငျတော့ အိမျမှာ အပူခြောငျးနဲ့ ကိုယျ့ဟာကိုယျအလိပျကွီးကွီးလိပျပွီး စပရေးဖွနျးလိုကျပါ။ ဒါဆိုယောငျးလညျး ဆံပငျအခှလေိပျလိပျလေးတှေ ရပွီးပေါ့။
ကဲ … ဒီလောကျဆိုရငျ ဆံပငျပါးတဲ့ယောငျးတှလေညျး ဆံပငျကို အုံထူသယောငျဖွဈအောငျ ဘယျလို styling လုပျရမလဲဆိုတာ သိကွလောကျပွီပေါ့နျော။ ဒီထကျပိုပွီး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျယုံကွညျမှုအပွညျ့နဲ့ လနျးနနေိုငျပါစေ ယောငျးရေ …
Tags: Beauty, Hacks, hair, Hair Style, stying, tips
Stella April 19, 2019